Shrub | January 2020
Ugu Weyn Ee Shrub
Qolka Thuja: degitaanka, daryeelka, taranta
Thuja waa wakiil ka tirsan jimicsiga jimicsiga oo ka soo jeeda qoyska Cypress. Dabeecadda, waxay ku koraan ilaa 7-12 m dherer ahaan. Waddankooda waxaa loo arkaa inay yihiin Japan iyo Waqooyiga Ameerika. Gurigan xajmiga ah wuxuu udub dhexaad u yahay hadiyad ama sida quruxda sanadka cusub ee fasaxa. Laga soo bilaabo guriga thuja weyn waa ugu yaraan dalban iyo ku farxi doonaa in ka badan hal sano.
Doorashada noocyada ugu fiican ee ash buurta ah ee beertaada
Rowan - geedo ama geedo ka mid ah qabiilka aaladda ee Apple-ka ee ka tirsan qoyska Rosaceae. Waxaa jira in ka badan 100 nooc oo ash buur ah, goobaha qaybinta dhirta waa Yurub, Aasiya iyo Waqooyiga Ameerika. Scarlet Rowan Large A geed quruxsan ama geed leh leh fur furan yahay faafin ballaaran-pyramidal, nidaamka xidid cufan, gaarey height ah 5-10 m.
Qeexida iyo sawirada noocyada ugu caansan ee banaan
Willow - geed qallalan ama geed, oo inta badan ku koraya cimilo diirran. Waxaa jira noocyo qaar ka mid ah kulaylaha iyo xitaa ka baxsan goobada Arctic. Archaeologists ayaa laga heley cajalado caleemo ah oo ka soo baxa kiriimyada Cretaceous oo ka weyn tobannaan malyan oo sano ah. Willow ayaa muddo dheer loo adeegsan jiray dhirta ornamental, nooca caan ee ugu caansan waxaa lagu tixgelinayaa maqaalkan.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Shrub 2020